I-Deepfakes iyini nokuthi isikhathi eside kangakanani leso senzakalo sasizungezile? : UMartin Vrijland
I-Deepfakes iyini nokuthi isikhathi eside kangakanani leso senzakalo sasizungezile?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-26 Juni 2019	• 1 Comment
Ngivame ukuxoxisana ngamasu okwenza abalingiswa abafake kakhulu. Kulaba bafundi abasha, ngingathanda ukuphinda lokho lapha ngenye imininingwane eminingana e-athikili ekhethekile ezinikezelwe kule sihloko. Ngoba uma ulandela izindaba zansuku zonke, kubaluleke kakhulu ukuthi ujwayele le ndaba, ngoba uzobona ukuthi yiziphi izindlela ezitholakala ngokudlala abantu. Kulula kakhulu.
I-Deepfakes yenziwa nge-GAN (Izindlela Zokukhiqiza Zokuncintisana)) amasu software. Le software isofthiwe ehlakaniphile ukuthi, ngokusekelwe ezinkambisweni eziningi ze-AI kwinethiwekhi, idala izinhlamvu ngaphandle kweze. I-A is English for Intelligence Intelligence; yini emele ukuhlakanipha kwengqondo. Enye inethiwekhi ye-AI bese ihlola izithombe ezidalwa yinethiwekhi yokuqala futhi zilahla noma zibavuma. Ngokwenza lokhu emjikelezweni, abalingiswa baba yiqiniso nakancane ngesinyathelo ngasinye, ukuze ukwazi ekugcineni ukukhiqiza abantu abaqanjiwe ababukeka njengabantu abajwayelekile bansuku zonke (ongase uhlangabezane nabo emgwaqweni). Uma ufuna ukwazi kahle ukuthi lokhu kusebenza kanjani, qala kuqala ubukela ividiyo ngezansi kusuka ku-NVIDIA (umakhi wekhadi legrafu eyaziwayo yama-PC).
Akusizi nje kuphela ukukwazi ukuthi le nqubo ikhona, kodwa futhi ukuthi umlingisi ojulile angasetshenziswa kanjani, isibonelo, amavidiyo noma ukudala amaphrofayela omphakathi wezenhlalo (kufaka phakathi umlando wonke; kufaka phakathi izithombe namavidiyo nokuthandwa kwabanye ukujula amaphrofayela omphakathi wezokuxhumana). Isibonelo, izingxoxo zezokuxhumana zomphakathi zingabhekwa kalula kwi-intanethi yi "abasebenzi basekhaya" noma abasebenzi be-telemarketing agency, isibonelo, lapho abalingiswa oxoxa nabo bengase bafihle ngemuva kwale phrofayili ejulile (abangani babo bezinethiwekhi nabo bagcwala amaphrofayli ajulile). Bangakwazi ukuhlasela abantu emgqeni wesikhathi sabo ezingxoxweni ukuze babe nomqondo phakathi kwabantu ngendlela ethile.
Ake sibuke wonke amathuba okufaka isicelo, kodwa ngaphambi kokuba siqale, kuyasiza ukwazi ukuthi imboni yegeyimu neyefilimu, kodwa futhi nabakhiqizi be-TV, baye baba namasu anjalo isikhathi eside. Kodwa-ke, umsebenzi manje usuwenziwe ngendlela elula ukuthi ungakwenza ngokwakho kwi-PC-garden-nasekhishini ye-home.
Lapho uPaul Walker efa phakathi nokuqoshwa okusheshayo nokufutheka kwe-7, inkampani ye-Weta Digital ibizwa ukuthi igcwalise inguqulo yefilimu kaPaul Walker. Ngokusekelwe ezinhlobonhlobo zezindlela ezifana nezithombe ezindala, ukuhlolwa komzimba kwabafowabo bakaPaul kanye nokukhishwa kwekhanda likaPaul, i-Weta Digital yaletha uPawulu Walker ekuphileni. Le vidiyo ngezansi inikeza isifinyezo sendlela lokhu kusebenza ngayo.
Inqubo yokubamba i-3D motion ikhona iminyaka eminingi lapho abadlali begqoka ama-suits ukurekhoda ukunyakaza kwabo bese beqamba izinhlamvu ezidalwe ngamakhodi nge-CGI. Lokhu kufana nesekhono elisetshenziselwa uPaul Walker, kuphela ngabalingisi abaphilayo abagqoke i-suit capture capture. Leyo mboni manje iyatholakala kubantu abanabelomali aphansi (bheka ividiyo ngezansi), kodwa isibonelo esihle sefilimu lapho le nqubo isetshenzisiwe kakade yi-Avatar ye-movie evela ku-2009 (bheka lapha).
U-NVIDIA usuvele esebenzise lezi zitshana nobuchwepheshe be-CGI, ngoba isebenzisa amanethiwekhi we-neural ukuqeqesha isofthiwe. Eqinisweni, lokhu kuyindlela efanayo emva kobuso obujulile. I-NVIDIA manje ayikwazi kuphela ukukhiqiza ubuso obungabikho, kodwa ingadlulisa edolobheni ngekhamera bese iyiguqula ibe yindawo yasebusika (ngesikhathi sangempela). Amasu anjalo angasetshenziswa ukuqeqesha isofthiwe ye-AI yezimoto zokuzishayela ngokushintsha isimo sezulu, kodwa angasetshenziselwa ukwenza ukufaneleka kokuthutha okuhambayo okungadingekile. Ikhamera ye-GoPro elula noma ikhamera yewebhu yanele. Bheka kusuka ku-1: i-03 min. Kuvidiyo engezansi ukuze ubone ukuthi lokho kusebenza kanjani.
Manje ungacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi wenze lokhu ngesikhathi sangempela akukhona. Cabanga futhi. Sibonile kakade ukuthi kungenzeka ukudala abantu abangabikho nge-Generative Adversarial Networks. Manje sisazi ukuthi kokubili imvelo yasemadolobheni kanye nomlingisi kungenziwa ngezigigaba ze-neural. Umbuzo wukuthi kungenzeka yini ngesikhathi sangempela. Yilapho ubuchwepheshe bokubuyiselwa kwesimo sangempela-isikhathi kufaka khona. Lokhu kuye kwaba yi-PC elula kusukela ngonyaka we-2015 (bona ividiyo ngezansi).
Konke kukho konke, ngakho-ke singakwazi ukusho ukuthi sekuye kwenzeka iminyaka eminingi ukukhiqiza amavidiyo aphansi. Kodwa-ke, ubuchwepheshe manje bube lula kakhulu nokuvela kwezinguquko zokukhiqiza ezenzakalelayo, amanethiwekhi we-neural kanye nama-real-time reenactment ebusweni, ukuthi empeleni ungadala umlando wonke womuntu ongekho emlandweni wemizuzu, ukuxoxwa bukhoma kwalowo muntu ongekho kungakha noma iyiphi imvelo kunoma yikuphi ukubuka kwekhamera nanoma yisiphi isimo sezulu.
Yiziphi izinkinga zalokhu? Ukuze uqale, ungasho ukuthi awukwazanga ukuthembela i-100% iminyaka. Buka lapha Kungakanani amasu e-CGI asetshenziswe embonini yefilimu. Noma kunjalo, okwamanje kulula kangangokuba noma ubani onesabelomali sezinkulungwane ezimbalwa zama euro angase akwenze lokhu. Uma sicabanga ukuthi abezindaba bafanele, ngakho-ke singacabanga ukuthi abazange basebenzise amasu anjalo iminyaka. Kodwa-ke, uma sicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi ohulumeni basebenza ngokusebenza kwengqondo ukuze baphathe ngokwengqondo abantu ukuthi bangene esimweni sokwamukelwa kwemithetho emisha neyinkimbinkimbi, kufanele siqaphele ukuthi iminyaka ngokweqile akukho lutho olumile endleleni yokukhiqiza izindaba ezikhohlisayo. Kulo mongo kuyathakazelisa kakhulu ukwazi ukuthi i-ejensi enkulu kakhulu yezwe (i-Algemeen Nederlands Persbureau; i-ANP eqoshiwe) isezandleni zomkhiqizi we-TV (ongumuntu ongumgidi wezigidi). Kumele sibe mkhulu kangakanani ukuqinisekisa ukuthi lezi zindlela azange zisetshenziswe iminyaka?
Kubonakala sengathi abezindaba bafuna ukulangazela ukuvala ukuvuza okushiwo uMartin Vrijland ngaphansi komkhumbi omkhulu wemidiya ejwayelekile. Sekuyiminyaka embalwa manje ngiye ngichaza ukuthi abezindaba bangasebenzisa kanjani izithombe. Ngakho-ke uJort Kelder no-Alexander Klöpping bavunyelwe ohlelweni lwe-Kelder & Klöpping TV bonisa yiziphi izinto ezijulile. Futhi uhlelo lomsakazo Isithombe sokunquma I-BNR Nieuwsradio (abaphathi be-perception) yakhulume kamuva lokho engikubhalile ngakho isikhathi eside. Kuyacaca ukuthi ukwesaba kuhlale kubonakala futhi ukuthi abenzi bezinhlelo kumele bazame ukugcina umbukeli nomlaleli ebhodini. Kumele uqhubeke uthembela emithonjeni yezindaba kanye nentando yeningi, ngoba akukho okubi nakakhulu kunokuba isixuku sivukele (ukukhuluma ngamazwi aseJort phansi).
Yiqiniso "isixazululo" kukho konke lokhu ukuthi ohulumeni kanye nezinkampani zezobuchwepheshe bazozama ukwengeza uhlobo lwe-watermark kumabhayisikobho, ukuze bahlolwe ngobuqiniso. Umbuzo owodwa wukuthi uma ohulumeni ngokwabo bebesebenzisa izindaba eziyinyumba ngeminyaka ukuze baphonse umthetho futhi badlale kubantu noma ngabe lelo watermark lithembekile kakhulu. Ingabe umhlanzi uzolahla inyama yakhe? Cha, akunjalo. Zonke izindaba ezivela kuJohn de Mol, NOS, De Telegraaf njalonjalo zilokhu zithembekile ngokuphelele futhi zithembekile! Isikhukhula. Ingabe ucabanga ngempela ukuthi uJohn de Mol uzovela e-TV namuhla noma kusasa athi: "Siyaxolisa madodakazi namakhosi, ngenze izindaba ezikhohlisayo nazo zonke iziteshi ze-TV nesofthiwe enginayo. Ngikhulume ngezindaba ezikhohlisayo futhi ngidlalwe ngokusebenza kwengqondo ngendleko yebhodlela lentela futhi ngigcwalise izikhwama zami"? Cha, akunjalo. Futhi-ke kufanele ugcine ukholo emaphephandabeni nakwahulumeni, ngoba ngubani okunye okumelwe ukwethembe? Funda lapha...
Izicelo ezifakiwe ezingenzeka:
ukujula amaphrofayela omphakathi wezokuxhumana
izithombe namavidiyo kusukela esikhathini esidlule kufaka phakathi umndeni nabangane
buza ingxoxo nomuntu ongekho
izithombe ezivela kumakhamera ezokuphepha
ividiyo njengobufakazi ezindabeni (ukukhiqizwa kwezindaba zamanga)
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: bnr.nl, wikipedia.org
Ingabe abezindaba basebenza nabalobi bombhalo bese bethengisa imisebenzi ye-PsyOp njengoba benza ngemiboniso ye-TV?
Ukufuna ngokucophelela lesi sisebenzi esasongela ukuphila kwe-PBS ku-Den Kolder
Inkinga enkulu, Ukuphendula, Isombululo kuchazwe
Amathegi: Ukuphazamiseka, ai, CGI, deepfakes, Digital, ubuso, afakiwe, GAN, Ukukhiqiza, ukuhlakanipha, okufakelwayo, abezindaba, izindaba ezikhohlisayo, amanethiwekhi, neural, izindaba, I-NVIDIA, ukufana kabusha, I-Weta
26 Juni 2019 ku-06: 15
Abaholi bale planethi basasebenzisa amasu afanayo. Ngokwebuchwepheshe, baqhubeka nezikhathi. Esikhathini esidlule ungaphinde uhambise izizwe zonke ngobuqili ngesibalo esingekho. Bahlale beyisinyathelo esisodwa ngaphambi kwethu ngokulawula umlando ngosizo lwezincwadi zomqulu nokunye okunjalo.
Esikhathini esidlule kwakukhona noMartin owaveza abantu ukuthi bayakhohliswa.
Into embi ukuthi abantu namuhla bacabanga ukuthi banenhlanhla kunezimbangi zethu. Angicabangi ukuthi kushintshiwe kakhulu, sisesezigqila sizikhandla ngokuluma nokuphuza.
Babevame ukusho ukuthi "akudingeki ukholwe konke abakushoyo"
Namuhla sithi "akufanele ukholwe konke okubonayo"
« U-Anja Schaap waseKenya ngoLwesihlanu olulandelayo "wangcwatshwa" emjikelezweni ovalwe
Isivumelwano sezulu: ukuba abantu egqokeni elihle »
kusukela ngomhlaka 18 kuFebhuwari 2020
Ukuvakashelwa okuphelele: 58.390
Ngabe u-André Hazes waphuka ngoba uBridget Maasland wayekopela kuMartin Vrijland?
Amabhomu aseRussia abhubhisa izimoto zaseTurkey ezihlome ngezikhali eSyria, isimo salola kakhulu
Igciwane leCorona, ukusikwa okufushane kokuqedwa kwemali kanye nemiphumela yezomnotho emhlabeni jikelele
Kungani indalo yonke iyikhaya lakho langempela
SalmonInClick op Ngabe i-IVF nemijovo yokugoma iholele ezizukulwaneni zezingane ezithandanayo?
UMartin Vrijland op Kungani indalo yonke iyikhaya lakho langempela
simsalabim op Kungani indalo yonke iyikhaya lakho langempela
UMartin Vrijland op Ngabe u-André Hazes waphuka ngoba uBridget Maasland wayekopela kuMartin Vrijland?
ellie op Ngabe u-André Hazes waphuka ngoba uBridget Maasland wayekopela kuMartin Vrijland?
SEARCH (iGoogle kusayithi)